Luxembourg Waxay Noqotay Wadankii Ugu Horeeyay Ee Yurub Si Loo Sharciyeeyo Xashiishada • Daroogada Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Luxembourg ayaa noqotay waddankii ugu horreeyay Yurub ee sharciyeeya xashiishadda
Luxembourg ayaa noqotay waddankii ugu horreeyay Yurub ee sharciyeeya xashiishadda
albaabka daroogada 31 Oktoobar 2021
maqaal by daroogada 31 Oktoobar 2021
Luxembourg ayaa noqon doonta waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee sharciyeeya beerista iyo isticmaalka xashiishadda, ayay dawladdu ku sheegtay bayaan.
Sida uu dhigayo sharciga cusub, dadka waaweyn ee Luxembourg ee ka weyn da'da 18 waxaa loo oggol yahay inay isticmaalaan xashiishadda oo ay koraan ilaa afar dhir qoyskiiba, taasoo ka dhigaysa waddankii ugu horreeyay Europa waxay noqon doontaa in si buuxda loo sharciyeeyo soo saarista iyo isticmaalka daroogada.
Go'aaminta ayaa sidoo kale si weyn hoos ugu dhigi doonta ganaaxyada hadda jira ee haysashada daawada ilaa inta u dhaxaysa € 25 iyo € 500 haysashada saddex garaam ama ka yar, laga bilaabo ganaaxyada hadda ee € 250 ilaa € 2500.
Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka xashiishadda ee dadweynaha ayaa weli ah sharci-darro.
Ka-ganacsiga abuurka ayaa sidoo kale lagu oggolaan doonaa sharciga cusub, iyada oo aan la xaddidin qaddarka ama heerarka tetrahydrocannabinol (THC), qaybta nafsiga ah ee xashiishadda. Isbedelka siyaasaddu waa dadaal dawladeed oo wax lagaga qabanayo dambiyada la xidhiidha daroogada iyo ka ganacsiga maandooriyaha ee suuqa madow. Wasiirada ayaa hadda awood u yeelan doona inay nidaamiyaan suuqa xashiishadda sharci darrada ah ee hadda jira.
Codbixintii ugu dambaysay ee Luxembourg ayaa loo baahnaa
Sharciga cusub ayaa taageero ka helaya isbaheysiga talada haya, balse weli waxaa loo baahan yahay in baarlamaanka loo codeeyo si loo xaqiijiyo soo jeedinta cusub.
Waxay ka dhigaysaa Luxembourg, oo ah waddan yar oo ay ku nool yihiin in ka badan 600.000 oo qof, safka hore ee dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee adduunka oo dhan. Qaaradda Yurub si loo nasiyo sharciyada xashiishadda.
Talyaanigu waxay u badan tahay inuu go'aan ka gaaro in xashiishadda lagu ciqaabayo aftida sannadka soo socda, ka dib markii kooxaha ololaha u suurtagashay inay ururiyaan saxeexyada 500.000 ee loo baahan yahay si loogu qasbo codbixinta.
Isticmaalka xashiishada laguma ciqaabi karo sharciga Talyaaniga, marijuana sababo caafimaad waa la ogol yahay. Si kastaba ha ahaatee, iibsashada, iibinta iyo beerista warshadda waa sharci-darro, ganacsataduna waxay wajihi karaan ilaa 10 sano oo xarig ah haddii lagu helo dambiga.
Haddii dadweynuhu u codeeyaan in xashiishada laga saaro, iibsashada, iibinta iyo beerista dawada dhammaantood waxay noqon doonaan sharci halkaas.
Ilo ay ka mid yihiin CNN (EN), caleen leh (EN), Siyaasadda (EN)
cannabisbeerista cannabisgo'aan qaadashoEuropaTalyaanigasharciyeyntasharci-dejintadharbaaxo
Saddex-xagalka dahabka ah: Aasiyada ugu weyn ee daroogada waligeed
Booliska Amsterdam ayaa xashiishad ka helay baaskiilka xamuulka iyo dhexda...
Cilmi baadhayaashu waxay u hagaajiyaan xashiishadda codsiyada caafimaadka
Bogga dib u eegista xashiishada ee khariidadaha weedmaps ayaa si guud u baxa...
9 arday oo dugsi hoose ah ayaa la dhigay isbitaal ku yaal Florida,...
Cilmi-baaris: Isticmaalka xashiishadda ee dhalinyarada ma aha…